विद्या भण्डारीको चुरीफुरीमा लाग्यो अन्तर्राष्ट्रिय झड्का - Media Dabali
काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी देशभित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर असंवैधानिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा आलोचना हुँदै आएको छ । पहिलोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई त सर्वाेच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिदिएको थियो ।
पछिल्लोपटक कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले खेल्नुपर्ने भूमिका राष्ट्रपति भण्डारीले खेल्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग खोप मागेको विषय बहसमा आयो । कतिपयले राष्ट्रपतिको अतिरिक्त सक्रियताको विरोध र आलोचना गरे ।
के राष्ट्रपति भण्डारीले सक्रियता देखाएर नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप आउने भयो त ? राष्ट्रपति भण्डारीको अतिरिक्त सक्रियतालाई अन्तर्राष्ट्रिय झड्का लागेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीकै सक्रियतामा भर परेर तत्कालीन परराष्ट्रपति प्रदिप ज्ञवालीले जेठ १४ गते १५ दिनभित्रै खोपमा ‘ब्रेक थ्रू’ हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर यसबीच मन्त्री नै पदमुक्त भइसके, उनले दिएको समयसीमा गुज्रिसक्यो तर खोपमा कुनै ब्रेक थ्रू भएको छैन ।
खोप आउनु त कहाँ हो कहाँ ? राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखलाई गरेको उच्चस्तरीय पत्राचारको जवाफ समेत आएको छैन ।
पछिल्लोपटक मन्त्री बनेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङ कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्ने कार्य प्रक्रियामै रहेको बताइरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विदेशबाट आवश्यक मात्रामा खोप आउनेबारे कुनै प्रगति भएको छैन ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भारत, अमेरिका र रुसका समकक्षी एवं बेलायतकी महारानी एलिजावेथ द्वितीय समेतलाई खोपका लागि आग्रह गर्दै पत्र लेखेकी थिइन् । तर ती देशबाट पत्र प्राप्त भएको जवाफ मात्रै आएको र खोप उपलब्ध हुनेबारे कुनै जवाफ नआएको स्रोतले जनाएको छ ।